'Efa ho 2 volana izao': nitory an'i Austin McBroom i TikToker Nate Wyatt taorian'ny nanambazana azy fa tsy voaloa ho an'ny hetsika Battle of The Platforms - Pop-Kolontsaina
'Efa ho 2 volana izao': nitory an'i Austin McBroom i TikToker Nate Wyatt taorian'ny nanambazana azy fa tsy voaloa ho an'ny hetsika Battle of The Platforms
TikToker Nate Wyatt dia nibitsika vao haingana fa teo am-panenjehana an'i Austin McBroom izy taorian'ny tsy nandoavana ny karamany tamin'ny fandraisany anjara tamin'ny hetsika ady totohondry Battle of the Platforms.
TikToker Nate Wyatt, 24 taona, fantatra amin'ny maha-ampahany amin'ny iray amin'ireo tranokala votoaty voalohany an'ny fampiharana, ny Hype House. Tamin'ny volana Jona, Nate dia nandray anjara tamin'ny hetsika ady totohondry Social Gloves 'an'ny Platforms, niady tamin'ny YouTuber DDG. Resy tamin'ny farany ny tolona tamin'ny fanapahan-kevitra niraisan'ny rehetra, Nate dia nandresy hatrany tamin'ireo mpankafy azy.
Nate Wyatt nitory an'i Austin McBroom
Ny alahady hariva dia nibitsika i Nate Wyatt, 'Azafady Vakio' miaraka amin'ny sary roa izay hita fa anisan'ny fitoriana.
Vakio azafady pic.twitter.com/vD2crcjr3Q
famantarana fa raiki-pitia aminy ianao
- Nate Wyatt (@itsNateWyatt) 9 Aogositra 2021
Raha ny filazan'i Nate dia efa ho roa volana izay no niadiany tamin'ny hetsika ady totohondry Austin McBroom, nefa tsy voaloa ny fandraisany anjara. Izany dia taorian'ny nanamafisan'ny influencer hafa toa an'i Taylor Holder sy i Josh Richards.
mandositra ny olako aho
Tao anatin'ny hafatra lava iray, nampahafantarin'i Nate ny mpankafy azy fa nanenjika tamin'ny fomba ofisialy ny Social Gloves izy.
'Mampalahelo fa ny herinandro lasa teo, ny mpisolovava ahy, Bobby Samini, dia nametraka fitoriana tamin'ny Social Gloves. Efa 2 volana izay ny hetsika ady totohondry teto amintsika ary mbola tsy voaloa (ao anatin'izany ny mpampiofana anay sns). Ny fonon-tànana fanantenana dia manao zavatra mety ary manefa ny adidiny amin'ireo rehetra tafiditra. '
Ao amin'ny sary natolotra, Nate Wyatt sy Taylor Holder dia samy soloin'ny mpisolovava iray ihany, Bobby Samini.
Ho an'i Austin McBroom, ny fitoriana an'i Nate sy i Taylor dia iray monja amin'ny maro. Araka ny tatitra, ny hafa toa ny orinasan-tserasera LivexLive, mpilalao NBA James Harden, ary maro hafa no miandry andalana hitory ny fianakaviana ACE Patriarch.
Ny fianakavian'i ACE koa dia voalaza fa mandalo ny fisamborana ny tranon'izy ireo any Los Angeles, ary koa notorian'ny mpiara-miasa tamin'i Catherine McBroom teo aloha tamin'ny 1212 Gateway.
fomba hanovanao izao tontolo izao
Amin'izao fotoana izao, Austin McBroom, ilay voalaza fa tompon'ny Social Gloves, dia mbola tsy nandoa ny mpiady totohondry sy mpandray anjara tamin'ny ady totohondry Battle of the Platforms.
Vakio ihany koa: 'Manantena aho fa ho hitanao amin'ny tena izy': Anna mamaly an-katezerana an'i Trisha Paytas rehefa voatonona tao amin'ny horonantsariny YouTube farany
Ampio Sportskeeda hanatsara ny fandrakofany ny vaovao momba ny kolotsaina pop. Raiso izao ny fanadihadiana mandritra ny 3 minitra.
inona no hatao rehefa mametraka ny fianakaviany ho lohalaharana ny vadinao
ny fomba fitoniana amin'ny fahatezerana
tanjona mahafinaritra apetraka ho anao
ny fomba hiatrehana bandy mafana sy mangatsiaka
ahoana no ahafantarana raha lehilahy izy
mibanjina ny masoko izy nefa tsy mitsiky